Nei Mwari Achibvumira Udzvinyiriri Uye Kushandisa Simba Zvisirizvo?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nei Mwari Achibvumira Kuti Vane Simba Vadzvinyirire Vasina Simba?
MuBhaibheri mune nyaya dzinoshungurudza dzevanhu vasina simba vaidzvinyirirwa nevaiva nesimba. Tinogona kufunga nezvenyaya yaNabhoti. * Ahabhi, mambo akatonga Israeri mumakore ekuma900 B.C.E., akabvumira mudzimai wake Jezebheri kuti aurayise Nabhoti nevanakomana vake, kuitira kuti mambo wacho atore munda waNabhoti wemizambiringa. (1 Madzimambo 21:1-16; 2 Madzimambo 9:26) Nei Mwari akabvumira kuti Ahabhi ashandise simba rake zvisirizvo kudaro?
‘Mwari haamborevi nhema.’—Tito 1:2
Ngatifungei nezvechikonzero chimwe chete chinokosha: Mwari haamborevi nhema. (Tito 1:2) Izvozvo zvinei nezviito zvakaipa zveudzvinyiriri? Pakutanga chaipo, Mwari akayambira vanhu kuti kumupandukira kwaizounza mugumisiro wakaipa werufu. Zvechokwadiwo sezvakataurwa naMwari, vanhu vave vachifa kubvira pakupanduka kwakaitika mumunda weEdheni. Rufu rwekutanga rwakatokonzerwa neudzvinyiriri, Kaini paakaponda munin’ina wake Abheri.—Genesisi 2:16, 17; 4:8.
Richitaura nezvenhoroondo yevanhu kubvira ipapo, Shoko raMwari rinoti: “Munhu akatonga mumwe munhu achimukuvadza.” (Muparidzi 8:9) Izvi zvave zvichiitika zvechokwadi here? Jehovha akayambira vanhu vake, vaIsraeri kuti madzimambo avo aizovadzvinyirira, zvichizoita kuti vacheme kuna Mwari. (1 Samueri 8:11-18) Kunyange Mambo akanga akachenjera Soromoni aidzvinyirirawo vanhu vake. (1 Madzimambo 11:43; 12:3, 4) Madzimambo akanga akaipa, akadai saAhabhi aitova neudzvinyiriri hwakanyanya. Pafunge: Kudai Mwari akaita kuti udzvinyiriri hwose ihwohwo husaitika, angadai asina kuita kuti mashoko ake ave enhema here?
“Munhu akatonga mumwe munhu achimukuvadza.”—Muparidzi 8:9
Yeukawo kuti Satani anotaura kuti vanhu vanongoshumira Mwari nekuda kweudyire. (Jobho 1:9, 10; 2:4) Kudai Mwari akadzivirira vashumiri vake vose pakudzvinyirirwa kwose, zvaisazoita kuti mashoko aSatani ave echokwadi here? Uye kudai Mwari aidzivirira vanhu vose kuti vasadzvinyirirwa, zvaisazoita kuti aite seari kutsigira nhema dzakatonyanya kukura here? Kudai aizotidzivirira, vakawanda vaizofunga kuti vanhu vanogona kuzvitonga pasina Mwari. Asi Shoko raMwari rinotaura zvinopesana naizvozvo parinoti munhu haatombokwanisi kuzvitonga. (Jeremiya 10:23) Tinoda kuti Umambo hwaMwari huuye nokuti ndihwo chete huchapedza udzvinyiriri.
Saka zvinoreva here kuti Mwari haana zvaanomboita neudzvinyiriri? Kwete. Funga nezvezvinhu zviviri zvaanoita: Chokutanga, anofumura udzvinyiriri sezvahuri chaizvo. Somuenzaniso, Shoko rake rinofumura zvose nezvezano raJezebheri paakaurayisa Nabhoti. Bhaibheri rinoratidzawo kuti mabasa akaipa iwayo anotsigirwa nemutongi ane simba asingadi kuzivikanwa. (Johani 14:30; 2 VaKorinde 11:14) Bhaibheri rinobudisa pachena kuti ndiSatani Dhiyabhorosi. Mwari anotibatsira kuti tidzivise zvakaipa nokufumura kwaanoita udzvinyiriri nezvakaipa, uye wacho anozvikonzera. Izvozvo zvinoita kuti tikwanise kuzorarama nekusingaperi mune ramangwana.
Chechipiri, Mwari anotipa tariro yakasimba yekuti udzvinyiriri huchapera. Kufumura, kutonga, uye kuranga kwaakaita Ahabhi naJezebheri, nevamwewo vakawanda vakaita saivo kunoita kuti tive nechokwadi kuti zvaakavimbisa zvokuti pane nguva yaacharanga vose vanoita zvakaipa zvichatoitika. (Pisarema 52:1-5) Mwari anotipawo tariro yekuti nokukurumidza achabvisa zvose zvinokonzerwa neuipi kune vaya vanomuda. * Saka Nabhoti aiva akatendeka nevanakomana vake vachararama nokusingaperi munyika ichange yava paradhiso isina udzvinyiriri.—Pisarema 37:34.
^ ndima 3 Ona nyaya yakanzi “Tevedzera Kutenda Kwavo” iri mumagazini ino.
^ ndima 8 Ona chitsauko 11 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nei Mwari Achibvumira Kuti Vane Simba Vadzvinyirire Vasina Simba?